Tin Can, Tin Box, Tin mandatsa-dranomaso, Tin Can Supplier - T-Star
Address avy amin'ny filoha
ny lalao Tin Box
Fahasalamana-care Tin Can
Tsy ara-dalàna endrika Tin Can
Round Tin afaka
Tin Box amin'ny PET
Tin Pensilihazo Case
Mofo manify Roll Tin Can
ny divay Tin Can
Factory mivantana, fa tsy raharaham-barotra ny orinasa
Amin'izao fotoana izao, T-kintana dia manana ny atrikasa lehibe sy nanarona tanteraka ny sampana 50.000 metatra toradroa, fitaovana tamin'ny 20 iombonana famokarana tsipika, ary mandeha ho azy ny vokatra 35 andalana.
Avo Standard T-Star Industrial Park, Miaraka Air fanadiovana Atrikasa (Fahadiovana kilasy 300.000)
Tsara sy ny tranon'omby Quality
Professional QC Stuff sady kanto mpiasa, nanome antoka ny amin'ny tranon'omby Production Amin'ny tsara Quality
Automatic Production-dalana, 400 mahery Fahaiza mpiasa, ary Scientific Naniraka
T-Star Tin Can Co., Ltd. dia matihanina fanitso Can mpanamboatra miorina ao Dongguan, akaiky an'i Hong Kong sy Shenzhen. Amin'ny maha-iraisam-pirenena vy fonosana orinasa, T-kintana dia tinplate manokana amin'ny fanontam-pirinty, ary afaka manao bebe kokoa noho ny 11 taona, miaraka amin'ny fahaiza famokarana isan-taona ny 50 tapitrisa firapotsy am-bifotsy.
Amin'izao fotoana izao, T-kintana dia manana ny atrikasa lehibe sy nanarona tanteraka ny sampana 50.000 metatra toradroa, fitaovana tamin'ny 20 iombonana famokarana tsipika, ary mandeha ho azy ny vokatra 35 andalana. Ankoatra izany, T-kintana koa dia mandova 8000 metatra toradroa mandeha ho azy bobongolo fanodinana & fikarohana foibe, ary koa ny azy orinasa fanontam-pirinty.
Fast lahateny sy tsara kalitao
Air fanadiovana atrikasa (fahadiovana kilasy 30.000) ny entana ny vifotsy boaty
Mahitsi- endrika sakafo antoandro firapotsy
Small Round Tea Tin mandatsa
Food kilasy manodidina endrika vifotsy ho mooncake fonosana
Telozoro endrika Tin Box for Game Toy Package
Bldg 1, No. 26 ny Bihu Rd., Tangli Village, Fenggang, Dongguan, Guangdong, Sina
Tea fitoeran-javatra , Tin Tea Box , Tea Tin Box , Tea Tin , Tea Box , Can Tea Tin ,